स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मारमा « News24 : Premium News Channel
स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मारमा
महोत्तरी । स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी अभाव छ । जसका कारण सर्वसाधारणले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् । कर्मचारी अभाव मात्र नभई भएका कर्मचारीले समेत काम नगर्दा सेवाग्राही वडा कार्यालय धाउन मै व्यस्त छन् ।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर १४ मा वडासचिब नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि सबै सुवा सुविधा सजिलै पाइएला भन्ने आश गरेका स्थानीय अहिले कर्मचारी अभावका कारण वडासँग सम्बन्धित कतिपय काम हुन नसक्दा मर्कामा परेका छन् ।
वृद्धभत्ताको लागि ४ पटक वडा कार्यालय धाएपनि भत्ता नपाएको देखिे वृद्धभत्ता लाभग्राही कार्ड नविकरण गराउन दिनैपिच्छे कार्यालय आउने सेवाग्राहीको घुँइचो दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । तर, सचिव नहुँदा कामकारवाही ठप्प भएको छ भने रिक्त कर्मचारी पूर्ति गर्न कार्यालय असफल हुँदै आएको छ ।
यता वडाध्यक्ष भने कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नगरपालिकालाई पटकपटक पत्राचार गरिएपनि सुनुवाई नहुँदा समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । वडामा ४ महिना देखि सचिव पद रिक्त छ । सचिव नभएकाले कार्यालय सहयोगीले नै अधिकांश गर्दै आएका छन् ।
वडा कार्यालयमा सचिव मात्र होइन अन्य कर्मचारीको पनि अभाव छ । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा विध्वा भत्ता, जन्मदर्ता, नागरिता लयातका काम सम्पादन हुन सकेको छैन ।
ला लिगा : बार्सिलोनामाथि सानदार जित निकाल्दै रियल मड्रिड शीर्ष स्थानमा उक्लियो
‘प्रचण्ड’माथि जुत्ता प्रहार, नेपालमा कोरोनाको हालको स्थितिबारे सम्बन्धित डाक्टर लाइभ (भिडियो)
अस्पताल भर्नाको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
बाटो नै नभएको ठाँउमा ठेकेदारले पक्की पुल बनाएपछि…
समाजका कुरीति र एसिड प्रहार जस्ता आपराधिक कार्य अन्त्यका लागि कानूनी कारवाहीको माग
फेवातालको जग्गा अधिकतम जोगिने गरी काम गर्न आग्रह
स्पेनिस फ्लुझैं घातक हाेला काेराेना?
कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता
access_time 7:07 am
प्रहरीको सुन्दर नाराभित्र क्रूर व्यवहार : ‘प्रहरी मेरो साथी’ र ‘मुस्कानसहितको सेवा’ खाेइ ?
काठमाडाैँ, १९ फागुन । एलिस वोलोविच नाम गरेकी नर्सिङकी एक विद्यार्थी फिलाडेल्फियाको एक अस्पतालमा बिहानको
काठमाडौँ, १९ फागुन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि
काठमाडौँ, १९ फागुन । सर्वसाधारण नागरिक तथा समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नेपाल प्रहरीका कतिपय जिम्मेवार